Rasmi: Filimka Dangal Axadiisa 3-aad Lacagaha Uu Keenay Iskoor Kale Ayaa Soo Kordhay | Filimside.com – Wararkii Ugu Dambeeyay Aflaanta Hindiga	Monday, February 20th, 2017	HOME
Mr. Perfectionist Aamir Khan filimkiisa Dangal ayaa ganacsi baaxad leh sameeyay Axadiisa sedexaad ee uu gudaha Hindiya saaran yahay.
Dangal qaybtiisa Af Hindiga lagu daawanayo wuxuu keenay 13.50 Crore (Trade Figure) axadiisa sedexaad sida shabakada Boxoffice India shaaca ka qaaday ayadoo kasoo xigatay kooxda cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa tiyaatarada iska leh.
Dangal maalintiisa 17-aad lacagaha uu keenay wuxuu ka badan yahay dhamaan filimada 2016 soo baxeen maalintooda kowaad lacagaha ay soo xareeyeen marka laga reebo Sultan, M.S. Dhoni – The Untold Story, Fan iyo Housefull 3 maalintooda kowaad lacagaha ay soo xareeyeen!
Dangal sidoo kale wuxuu noqday taariikh ahaan filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo todobaadkiisa sedexaad sedexda maalmood ee ugu horeyso (Third Weekend) madaama uu keenay 29.75 Crore qaybtiisa Af Hindiga lagu daawaday wuxuuna dhaafay filimada PK (26.75 Crore) iyo Bajrangi Bhaijaan (19.75 Crore) oo horey u ahaayeen labada filim ee todobaadka sedexaad sedexda maalmood ee ugu horeyso lacagaha ugu badan soo xareeyeen.
Dangal qaybtiisa Af Hindiga lagu daawanayo mudo 17-maalmood wuxuu soo xareeyay 334.50 Crore waana hubaal inuu maanta oo Isniin ah dhaafi doono filimka PK iyo iskoorkiida 338 Crore ee mudo labo sano la jebin waayay.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Dangal mudo 17-maalmood lacagaha uu soo xareeyay qaybtiisa Af Hindiga lagu daawanayo:
Todobaadka sedexaad mudo sedex maalmood ah – 29.75 Crore
Wadarta Guud – 333.63 Crore (Trade Figure) waa qaybta Af Hindiga lagu daawaday oo kaliya lacagaha uu ka keenay.
Dangal hadii loogu daro lacagaha qaybta Tamil iyo Telugu lagu daawaday filimkaan wadarta guud Hindiya oo dhan mudo 13-maalmood wuxuu kasoo xareeyay 344.63 Crore (All India Business).
Waxaa Aqrisay Warbixintaan (1084)
"Rasmi: Filimka Dangal Axadiisa 3-aad Lacagaha Uu Keenay Iskoor Kale Ayaa Soo Kordhay", 5 out of 5 based on 1 ratings.La Wadaag AsxaabtaadaTweetPrintEmailLike this:Like Loading...
xasancilmijeeri. says:	9, January 2017 at 9:44 pm	maanta 5 cr inu ka hoos dhocin an rajaynaa..
khadar khiladi says:	9, January 2017 at 8:48 pm	caadi ma ahan ninkan
amir khan ah 400 crore ayuu u socdaa imikana